Astaamaha iyo farsamooyinka dhismaha ee sabuuradda dhagaxa weyn
Astaamaha lagu garto sabuuradda dhagaxa weyn Farsamaynta Dhismaha sabuuradda dhagaxa Calaamadaha astaamaha sabuurada dhagaxa 1. Caabbinta dabka Maadada ceeriin ee dhogorta dhagaxa ah waa dhagax volcanic dabiici ah, oo ah dab-diid ...
Hordhaca iyo ka-taxaddaridda taxaddarrada sanduuqa nadiifinta
Nadiifinta sanduuqa nadiifinta waa nooc ka mid ah qalabka dhismaha oo tayo sare leh, guud ahaan lagu dabaqi karo warshadaha injineernimada nadiifka ah oo leh shuruudo sare oo loogu talagalay deegaanka gudaha, guddi rooti rooti ah oo sida caadiga ah loo isticmaalo waxaa ka mid ah warqad olol-celinaysa malabka malabka ...
Ma ogtahay waxa ay yihiin astaamaha lagu nadiifiyo qamriga sandwich-ka
Aqoon isweydaarsiyo badan iyo meelo kale ayaa lagu dhisay sabuurado ismaris lagu nadiifiyo. Xaqiiqdii, waxaa jira noocyo badan oo ismaris ah oo looxa lagu nadiifiyo. Waxaan u kala qaybin karnaa noocyo kala duwan iyadoo loo eegayo alaabooyin iyo adeegsiyo kala duwan. Tusaale ahaan, silica (eps cement) purifi ...
Yancheng polyurethane sanduuqa saaraha sanduuqa Yi'an guddiga nadiifinta birta
Polyurethane looxyada isku dhafan ayaa sidoo kale loo yaqaan 'PU sandwich board', oo ka kooban laba lakab oo taarikada birta midabada leh ee labada dhinacba ah, walxaha aasaasiga ahna waxaa lagu daray polyurethane xumbo leh. Waxay ku dhameystiri kartaa nidaamka isku dhafka xarumaha bulshada ama warshadaha hal mar. Isku hagaajinta khadka tooska ah ...